काठमाडौ : नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अब्लुल्लाह अल्मुताइरीले पद त्यागको घोषणा गरेका छन् ।
आज नेपालले साफ च्याम्पियनसिपमा बंगलादेशसँग १–१ को बराबरी खेलेको थियो । यससँगै नेपालले फाइनलमा स्थान बनाएको छ । नेपालले साफ च्याम्पियनपसिपको फाइनलमा स्थान बनाएको यो पहिलोपटक हो ।
तर, प्रशिक्षक अल्मुताइरीले भने आफूले टिमलाई ऐतिहासिक सफलता दिलाएको भन्दै साफको फाइनलपछि आफू नेपाल नफर्किने बताए ।
‘‘अन्तिम तीन दिनमा मैले धेरै नराम्रो अनुभव गरेँ । ममाथि धेरै अरोप लाग्यो । हिजो हाम्रो ३ बजे ट्रेनिङ थियो । त्यसकारण सहायक प्रशिक्षक र अर्को एकजना खेलाडी प्री म्याच प्रेस कन्फ्रेन्समा आएका हुन् ।
एउटा मिडियाले त्यसैलाई समाचार बनायो र मजाक उडायो,’’ नेपालका प्रशिक्षक अल्मुताइरीले भने, ‘‘आफ्नो प्रशिक्षकलाई त सम्मान गर्नुपर्छ । हामी प्रशिक्षक हौँ । नोकर होइन । हामी परिवार हौँ । हामी मानव हौँ ।
हाम्रो बच्चाहरू छन् । मैले त्यो मिडियालाई सोधेँ । म्याच फिक्सिङको अरोप लगाएर खुसी भयौ ? गर्व महशुस भयो ? म नोकर होइन । प्रशिक्षक हुँ । फुटबल विकासका लागि नेपाल आएको हुँ ।
मैले नेपालमा भएको पत्रकार सम्मेलन भनेको थिए । म इतिहास रच्न चाहन्छु । त्यो आज पूरा भएको छ । अब हामी शनिबार फाइनल खेल्नेछौँ । यो मेरो अन्तिम खेल हुनेछ । त्यो खेलपछि म कहिल्यै नेपाल फर्किने छैन ।’’
बंगलादेशी खेलाडी रोएको दृष्यले नेपाली दर्शकलाई सन् १९९९ को साग फुटबलको फाइनलको याद ताजा गराएको छ । घरेलु मैदानमा भएको उक्त फाइनलमा नेपाल बंगलादेशसँग १-० ले हारेको थियो ।
खेलमा पूर्णनियन्त्रण कायम गरे पनि गोल गर्न चुक्दा नेपाल उपाधिबाट वञ्चित भएको थियो । नेपाली खेलाडीहरू यसरी नै मैदानमा रोएका थिए । बंगलादेशसँगको उक्त हारको बदला नेपालले आज लिएको छ ।
२०७८ आश्विन २७, बुधबार १६:०७ 1 Minute 1627 Views